शारीरिक सम्बन्धको विषयमा महिलाहरुले सोच्छन् यी १० अनौठा कुरा « Lokpath
२०७६, २० श्रावण सोमबार १३:१२
प्रकाशित मिति : २०७६, २० श्रावण सोमबार १३:१२
हाम्रो समाजमा अझै पनि यौनका कुरा खोलेर गर्दैनन् । त्यसैमाथि युवतीहरु त झन् यो कुरामा एकदम पछाडी नै छन् । एक अध्ययनका अनुसार हरेक युवती/महिलाले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहन्छन् । र मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठा अनौठा यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँछन् । केटीहरुले यौनको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोंच्छन् ? अध्यनको निष्कर्ष यस्तो छ
१. अपरिचितसँग सेक्सः
अधिकांस महिलालाई अपरिचित पुरुषले छुँदा नराम्रो लाग्छ । तर कतिपय समयमा अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्ने विषयमा महिलाहरु उत्तेजित हुन्छन् । अध्ययन भन्छ अपिरिचितसँग यौन सम्बन्ध राख्दा सबै सीमा भुलेर रमाइलो गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको सोंचाइ हुन्छ ।
अधिकांस महिलालाई अपेक्षा हुन्छ कि कुनै पनि पुरुषले उनीसँग मालिक जस्तो व्यवहार गरोस् । उठाएर ओछ्यानमा लागोस् र कपडा खोलेर क्रिडा गरोस् । अलि हेप्ने र होंच्याए जस्तो गर्ने पुरुषसँग सेक्स गर्न रुचाउदैनन् ।
३. महिला-महिला सेक्सः
महिला पुरुषसँग मात्र होइन कतिपय महिलासँग पनि आकर्षित हुन्छन् । महिला महिलाबीच आपसी यौन सन्तुष्टी दिने व्यवहारबारे पनि महिलाहरुले सोंचिरहने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
४. चरम सन्तुष्टिको चाहानाः
महिलाहरु हरेक पटक चरम सन्तुष्टिको यौन सम्बन्धबारे सोंच्छन् । तर सँधै यस्तो वास्तविक जीवनमा भने नहुन पनि सक्छ ।
अधिकांस महिलाहरुलाई नदी वा समुन्द्र किनारमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने चाहाना हुने अध्यनले देखाएको छ । आफूलाई मन पर्ने पुरुषसँग यस्तो स्थानमा एक्लै हुन पाइयोस भन्ने उनीहरु सोंच्छन् ।
६. निर्वस्त्र हुने चाहानाः
महिलाहरु पुरुषको अगाडी कपडा खोल्न लाज मान्छन् । तर उनको चाहाना पार्टनरले कपडा खोलिदियोस भन्ने हुन्छ । हिल चप्पल लगाएको बेला होस् या सेक्सी लाञ्जरी महिलाहरुलाई यस्तो चाहाना बढी हुन्छ ।
७. सभ्य वलात्कारः
कुनै पनि महिलालाई बलात्कृत हुने चाहाना हुँदैन । तर कुनै पनि मन परेको पुरुषले जवर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखोस् भन्ने चाहाना चाँहि उनीहरुमा हुने अध्यनको निष्कर्ष छ ।
कुनै पनि महिलालाई बाथरुममा यौन सम्बन्ध राख्ने भित्री चाहाना सँधै हुने अध्यनको भनाइ छ । सावरको मुनी बढी उत्तेजित अनुभव गर्छन् महिलाहरु ।
१०. एक रातः
दुनियाँले जे सुकै सोंचोस् आफूले मन पराएको पुरुषसँग एक रात मनाउने चाहाना हरेक स्त्रीमा हुन्छ । पहिलो यौन सम्बन्धबारे उनीहरु सँधै सोंचिरहन्छन् । एजेन्सीको सहयोगमा